Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: Let’s Help Rakhine – ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှသည် ရခုိုင်ပြည်သို့ ဈေးရောင်းအလှူပွဲ ဆိုင်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီ
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှသည် ရခုိုင်ပြည်သို့ ဈေးရောင်းအလှူပွဲ ဆိုင်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီ
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၂
လာမယ့် ဇူလိုင် ၈ ဆန်းဒေး၊ နယူးအခ် ရိပ်သာရင်ပြင်မှာ မြန်မာနဲ့ အာရှရိုးရာ စားသောက်ဖွယ်ဈေးရောင်း အလှူပွဲတော် ကျင်းပပြီး မြန်မာပြည်၊ ရခိုင်ဒေသက ဒုက္ခသည်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လှူဒါန်းမယ့် အလှူရှင်ဈေးဆိုင်ပေါင်း ၂၀ ကျော် သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးဧရိယာက မြန်မာ့အရေး အလှူလက်မနှေးသူ မြန်မာမိသားစုများ၊ စေတနာရှင်အလှူ ဈေးခင်းမည့်သူများ၊ လုပ်အားပေးစေတနာရှင်များ အားလုံး တယောက်တလက် ၀ိုင်းဝန်းကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်ပါ လုပ်အားပေးတာဝန်ခံများကို ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။
ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေး - ဦးညွန့်သန်း၊ ဒေါ်နွေဦး၊ ဦးရှောန်၊ ဦးဂျေစင် နဲ့ ဦးကျော်သူရ
အလှူရှင်များ ၊ စေတနာရှင်များ ဆက်သွယ်ရေး – ဦးစိန်ထွန်း၊ ဦးညွန့်သန်း၊ ဦးကျော်သူရ၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်သော်၊ ဦးဂျေစင်နဲ့ ဒေါ်ခင်ထွေး
ဘဏ္ဍာရေးရာ – ဦးရှောန်၊ ဒေါ်နွေဦး နဲ့ ဒေါ်ခင်ထွေး
ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဦးမောင်ရစ် တို့က ဆောင်ရွက်နေကြကြောင်း သိရပါတယ်။
အများပြည်သူ ဧည့်သည်တော်များ စိတ်ဝင်စားမယ့် စားသောက်ဖွယ်များ အားပေးလှူဒါန်းနိုင်ကြဖို့ စားဖွယ်ရာစာရင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ အာရှရိုးရာ စားဖွယ်ရာများ
2. အချိုရည်၊ ရေသန့်ဘူး
· ကိုအောင်သူ၊ မ၀ါ မိသားစု
· နွေဦး ဒိုးပတ်အဖွဲ့
· မမေသန်းဋ္ဌေး၊ မထွေးထွေးဝင်း
· ကိုအစန်း၊ မနယ်လီ မိသားစု
· ဗေးဧရိယာ မြန်မာကွန်မြူနီတီစင်တာ
· မအိပ၊ မအေးအေးအောင်
· မီးမီးမ မိသားစု
· ဦးကျော်လင်း၊ ဒေါ်နန်းခမ်းရွှေ
· ကို Harry မနန်း မိသားစု
· ဒေါ်ကြင်ကြင်စိန် မိသားစု
· ဦးဋ္ဌေးကျော်၊ ဒေါ်ခင်လှ မိသားစု
· ဒေါ်ကြင်လှိုင်၊ မ Mary
· Burmese American Catholic Fellowship
· ဒေါ်မေကြည် မိသားစု
· ဒေါ်ကြည်ကြည်ချစ် မိသားစု
· မနီနီသော်၊ မခင်ထွေး
· အန်တီသင်း မိသားစု
· ကိုထွန်းနိုင် မိသားစု
· ကိုဘိုဘို၊ မယု သူငယ်ချင်းတစု
ထပ်မံပြီး လက်ခံရရှိသော အခြားအလှူရှင်များလည်း ထပ်မံကြေညာပါမည်
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 01:36
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: Let’s Help Rakhine – ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှသည် ရခုိုင်ပြည်သို့ ဈေးရောင်းအလှူပွဲ ဆိုင်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီ . All Rights Reserved